चोलेन्द्रको ,घर के ले छाउने हो ?::Nepali News Portal from Nepal
चोलेन्द्रको ,घर के ले छाउने हो ?
पोखरा ,२० चैत -चर्चित गायक चोलेन्द्र पौडेलले नेतालाई रुप नफेर रङ नफेर देशको मुहार फेर्न आग्रह गरेका छन । श्रमको मूल्य नहुदा आफ्नै देशमा काम गर्ने रहर हुदा हुदै पनि मुग्लान जानुपर्ने वाध्यता रहेको छ ,पौडेलले भने मजदुर किसानको मुहार कहिले फेरिन्छ सरकार ? गायक पौडेलले कुनै भाषणमा यस्तो भनेका होइनन । भर्खरै बजारमा सार्वजनिक भएको नयाँ गीत मार्फत उनले यस्तो भनेका हुन। ‘घर के ले छाउने हो ?’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ।
मजदूर ,किसान र गरीव जनाताको साथले देशमा परिवर्तन भएपनी उनिहरुको अवस्थामा परिवर्तन भएन । गरिब र दुखीका दिन उस्तै छन् । आजपनि मजदुरी गर्ने, ज्यालादारीका दिन जस्ताको त्यस्तै छ । महंगीको चपेटामा रहेका गरिब दुखीको कथा गीतले बोलेको छ ।
गीतमा सुरबीर पण्डित र स्वस्तिका लामिछानेको अभिनय रहेको छ। चन्द्रबहादुर बिकको शब्द रहेको गीतमा उदघोषण र कलाकारिता क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल कलाकार चोलेन्द्र पौडेलको स्वर र संगीत रहेको छ। गीतको म्यूजिक भिडियोको निर्देशन तारानाथ आचार्यले गरेका छन।
बागलुङ चिनाउन चलचित्र ‘बुकि’
सार्वजनिक भयो ‘कथा दलितको’
बाँदर लड्ने सहश्रधारा झरनामा मान्छेको चिप्लेटी (भिडियो)
पोखरा महानगरपालिकाको गेटमा कांग्रेस जनप्रतिनिधिको आन्दोलन ,मेयर लाई होसियार हुन भने
विचल्लीमा परेका विष्णु खत्री यस्तो अवस्थामा फेला परे (भिडियो सहित )
बसन्त र लक्ष्मीको लोभी आँखाको बजारमा चर्चा